Booliska UK oo toogtay nin weerar ka geystay buundada magaalada London – Maanta Online
Booliska UK oo toogtay nin weerar ka geystay buundada magaalada London
Nin toorey ku hubeysan ayaa weeraray dad marayay buundada caanka ah ee ku taala bartamaha magaalada London, hase yeeshee 30-daqiiqo kaddib markii la wargeliyay ciidamada Booliska magaaladaasi toogtay xilli ninkaasi mindidiyihii uu watay laba qof qudha uga jaray isla markaana dhaawacyo kala duwan u geystay dhowr qof oo rayid ah.
Cusmaan Khan oo 23-jir ah ayaa geystay weerarka ka dhacay gelinkii dambe ee shalay ayay sheegeen saraakiil ka tirsan Booliska magaalada London inuu ahaa wiil horay loogu sii daayay xabsiga damiin kaddib markii falal argagixiso uu ku lug yeeshay, iyagoona baaraya falka ninkaasi tooreyda sitay uu ka geystay goobta mashquulka badan ee buundada ah oo ay ku yaalaan goobaha ganacsiga ugu waaweyn dalka Ingiriiska isla markaana hal bowle u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka.
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Ingiriiska Boris Johnson ayaa ciidamada ammaanka ug mahad celiyay howlgalka lagu khaarajiyay ninkii ka dambeeyay weerarkaasi oo isku soo xiray walxaha qarxa ee macmalka ah, isagoona shacabka magaalada London uga tacsiyadeeyay weerarkaasi oo uu ku tilmaamay inuu ahaa mid argagixiso ah.
Duqa magaalada London ayaa war uu ka soo saaray weerarka ka dhacay buundada magaalada London waxa uu sheegay inuu ahaa mid fool xun, isagoona tacsi u diray eheladii dadkii waxyeelada ka soo gaartay, wuxuuna caddeeyay inay socdaan baaritaano ku saabsan weerarkaasi iyo waxa uu ku saleysan yahay ujeedka ninka la dilay ee weerarkaasi fuliyay ka damacsanaa.
Xaalada halkii uu weerarka ka dhacay ayaa saakay caadi ku soo laabatay kaddib markii halkaasi isaga tageen ciidamada Booliska magaalada London oo iyagu baaritaano ka waday muddo ka badan 10-saac, iyadoo la filayo in saacadaha soo socda ay soo saaraan macluumaad la xiriira baaritaankooda.
Shacabka degan magaalada London kuma cusba weerarrada loo adeegsado mindiyaha amaba Tooreyda, iyadoo horay uga cabanayay dhibaatooyinka kooxaha Gaangiska loo yaqaano iyagoo adeegsanaya Tooreyda isku dilayeen dhexdooda, halka xubno taageersan ururrada argagixisada caalamiga ah iyaguna dalal Yurub ka tirsan dilal ka geysteen xilli ay isticmaalayeen Toorey.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Boqortooyada Ingiriiska ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta uu ku yeelan karo weerarada noocaan ah ee Mindiyaha loo adeegsanayo, bacdamaa dhallinyaro Soomaali ah oo ka tirsan kooxaha Gangiska loo yaqaano horay isugu dileen weerarrada Mindiyaha, iyadoo saraakiisha Booliska magaalada London ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa fal argagixiso. XIGASHO: Wakaalado
← Ciidamo Itoobiyaan ah oo gaaray Dhuusamareeb xilli xaalad xasaasi ah jirto
Dagaal ka dhashay dahab laga helay gobolka Sanaag oo faraha ka sii baxaya →
Xuutiyiinta Yemen oo qirtay in ladilay hogaamiyahooda walaalkiis.
Qaar ka mid ah idaacadaha Muqdisho oo bilaabay barnaamijyo ku cusub mihnadda Saxaafadda